Workflow, mandeha ho azy ny hetsika amin'ny iOS miaraka amin'ity app ity | Vaovao IPhone
Raha mpampiasa OS X ianao dia azo antoka fa ho fantatrao ny Automator mandeha ho azy hetsika sasany izay ataontsika matetika. IFTTT koa dia manaraka an'io andalana io ihany, na dia amin'ity tranga ity aza, mifototra amin'ny Internet ny serivisy. Raha mila zavatra mitovy amin'izany ianao hihazakazaka eo amin'ny iPhone na iPad anao, dia Workflow no fampiharana tadiavinao.
Misaotra ny Workflow azonao atao mamorona workflows izay mampivondrona ireo hetsika 100 samihafa azontsika atambatra araka izay tiantsika. Betsaka ny azo atao ka ampy ny mandany minitra vitsy hijerena ny katalaogin'ny hetsika hahafahana mamorona hetsika mandeha ho azy, ohatra, mamela antsika hamoaka ny sary rehetra avy amin'ny pejin-tranonkala iray, hamoaka sary amin'ny tambajotra sosialy samihafa ao amin'ny Mandritra izany fotoana izany, mamorona sarimiaina GIF avy amin'ny sary izay efa notehirizinay ho fahatsiarovana anay sy bebe kokoa.
Raha taorian'ny fividianana ny Workflow dia very kely isika, manome antsika andian-dahatsoratra ny fampiharana hetsika efa namboarina ho fenitra mba hahafahantsika manomboka mampiasa azy io raha vantany vao misintona azy isika. Ny hetsika mandeha ho azy izay mahaliana antsika dia mety ho lasa kisary lohataona na ho lasa fanitarana ny iOS 8 hahafahana manatanteraka azy ireo amin'ny fampiharana hafa.
Raha matetika ianao dia manao lahasa manokana amin'ny iPhone na iPad anao, Ny workflow dia mety hamonjy fotoana betsaka aminao amin'ny famadihana an'io asa io ho hetsika mandeha ho azy izay mandeha segondra.
Raha mividy azy izao ianao dia afaka manararaotra ilay tolotra fampidirana noho io, azonao atao ny mividy Workflow miaraka a Fihenam-bidy 40% momba ny vidinao mahazatra:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Workflow, ataovy automatique ny hetsika amin'ny iOS amin'ity app ity
Lisitr'ireo tweaks rehetra mifanaraka amin'ny iOS 8.1.2